5 Mejọrọ nke nwere ike Your nweta Email gị na Spam nchekwa | Martech Zone
Ọ bụrụ na enwere akụkụ nke ọrụ m nke na-aga n'ihu na-eme m isi m megide mgbidi ahụ, ọ bụ ozi nnapụta email. Anyị na-aga n'ihu na-eto eto ndị debanyere aha email mana geesh, ndị ISP bụ ndị nzuzu. Na azụmaahịa, otu ihe na - eme bụ na ozi ịntanetị na - atụgharị ka ndị ọrụ na - abịa. Anyị ga-enwe ndị debanyere aha mgbe niile na-emekọrịta ihe maka ọnwa na mgbe ahụ - poof - ozi ịntanetị ibiaghachi. Ma ọ bụ nke ka njọ, ha na-agara ndị ọrụ ndị ọzọ na-akọ ya dị ka SPAM.
Anyị nwere ike ịga izu ole na ole na-enweghị mkpesa ọ bụla nke SPAM na obere obere wepu aha na ego then wee kọwaa pasent nke ozi ịntanetị na-eme ka igbe mbata elu ma ọ bụ ala. Otu isiokwu ahịrị, otu nnyefe oge, otu sava IP zitere site na, otu azịza adreesị… otu, otu, otu… na kaboom. Idobe na mgbapụta. Izu ole na ole gara aga, obere ISP edepụtara anyị. Mgbe anyị rịọrọ ihe kpatara ya, ha nyere anyị ike wh ịgwa anyị ihe mere. Ọ dịka a ga-asị na ha na-anwale anyị iji hụ ma anyị bụ ndị legit. Ma anyị abụghị nnukwu emailer - ndepụta anyị gbasara 75,000.
Ọ bụrụ na ị na-eji ndị na-eweta ọrụ email (ESP), ị maghịdị ihe pasent igbe mbata gị bụ. Ndị na-ere email na-akwalite mgbe niile nnapụta scores - ya bụ, ọnụ ọgụgụ nke ozi ịntanetị na-eme ka ọ na ebe. Ha ga-enwe ahịrịokwu nke ịchọrọ ka ị ziga na ndepụta gị ugboro ole na ole tupu ị hụ nnukwu nnapụta nọmba. No kidding… niile ọjọọ adreesị email ga-ibiaghachi na-ewepụ, otú gị igbe deliverability pasent kwesịrị inwe na nọmba ha rere gị na.
Nsogbu bụ na ọnụọgụ ma ọ bụ pasent bụ naanị ihe nyefere… ọ bụghị nyefere na igbe mbata. Ọ bụ ya mere anyị ji eji 250ok - inyocha anyi aha nnabata igbe mbata yana aha onye zitere anyị. na 250ok, anyị enweela ike idozi ụfọdụ ezigbo nsogbu karịa oge… mana anyị ka nwere ụfọdụ mgbago na mgbago na-enweghị nkọwa.
Nke ahụ kwuru, enwere usoro kachasị mma ị nwere ike ịme nke ga - eme ka nsonaazụ gị ka mma (maka ugbu a). TechnologyAdvice Research wepụtara infographic, 5 nke Top Email Mejọọ nke Ga-eziga Gị na Spam nchekwa. The infographic atụmatụ nkịtị email ahịa njehie:
Ikike ezughi oke
Odighi onye ziri ozi ziri ozi
Ọdịnaya na-adịghị mkpa
N'ebe ahụ ị nwere ya… zipu ikike, zipu ọdịnaya dị ukwuu, ma zipu site na a nnukwu onye na-eweta email.
Tags: 250oknnapụtaaha nnapụtaozi nnapụta emailnnyefe ozispam oziaha ọma ipziri ozi idziri ozispamspam nchekwaspammy ọdịnaya
Mee 4, 2015 na 10: 16 AM
Ọ bụ ihe ijuanya na e-akwụkwọ akụkọ a n'izu a na-egosipụta akụkọ a zigara m ozi m na-ezigara…
Mee 4, 2015 na 10: 37 AM
N'okwu mmeghe m! N'ihi ya iwe!
Mee 9, 2015 na 10: 38 AM